प्रतिस्पर्धी मूल्य निलम्बित प्लेटफार्म - Buildinglift.com
प्रतिस्पर्धी मूल्य निलम्बन प्लेटफार्म
इस्पात निलम्बन प्लेटफर्म
इस्पात संरचना, पाउडर चित्रकलाको साथमा विरोधी जंग सतह जो पेंट स्प्रेकिंग भन्दा बढी प्रभावकारी, आर्थिक र कलात्मक छ। व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार रंग वैकल्पिक छ।
नाम: निलम्बित प्लेटफार्म
निलम्बन तंत्र को लागि स्थापना, समायोजन र सावधानी
1. जमीन स्थापना गर्दा, क्षैतिज विमान चयन गर्नुपर्छ। जब एक ढलान छ, यो कोण पहिया अन्तर्गत सुदृढ स्तरको हुनुपर्छ। यदि स्थापना सतह निविड़ अंधकार र अशुद्ध छ, यो क्रश रोक्न अगाडि र पछिल्ला सीटहरू बीच 2.5 ~3सेन्टीमिटर मोटाई हुनुपर्छ। पनरोक इन्सुलेशन स्तर।
2. समायोज्य समर्थन ब्रैकेट को उचाइ यस्तो हुनुपर्छ कि अगाडि बीमको सानो साइट मोनेट (वा अन्य बाधाहरू) को उचाई भन्दा सानो छ। यदि सम्भव छ भने, निलम्बन तंत्र पछि स्थिति पछि, अगाडि बीमको निचो पक्ष विस्तार गरिएको छ। छोरीको पर्खाल काठको ब्लकहरूसँग तय गरिएको छ।
3. रेटेड बीमको ओभरहोङ्गिङ अन्त्यको रेटेड एक्सटेन्सन दायरा 0.3 ~ 1.5 मिटर छ। जब मूल्याङ्कन गरिएको ओभरहोङ भन्दा बढि छ, विश्वसनीय भरोसेमंद उपायहरू र मूल्याङ्कन गरिएको काम लोडहरू प्रयोग गर्नु अघि जिम्मेवार विभाग द्वारा लिइनेछ र प्रमाणित हुनुपर्छ।
4. अगाडि र पछिल्लो सीटहरू बीचको दूरीलाई साइटको अवस्था अन्तर्गत अधिकतम दूरीसम्म समायोजन गर्न सकिन्छ।
5. दुई कोष्ठक बीचको दूरी निलम्बन प्लेटफार्मको लम्बाइ भन्दा3देखि5सेमिमिटर लामो दूरीमा समायोजन हुनुपर्छ।
6. इस्पात तार रस्सी कसुर गर्दा, अगाडि बीम को3~5सेन्टीमिटर लामो समयको उत्थान गरिनुको निम्ति प्रतिष्ठान उत्पादन गर्न र अगाडि बीम को कठोरता सुधार गर्न।
7. जब तार रस्सी clamped, रस्सी clamps को संख्या तीन भन्दा कम छैन, र U को आकार खुल्ला र इस्पात तार रस्सीको अन्तिम अन्त एक-अर्काको विपरीत हो, र निर्देशनहरू समान छन्। रस्सी क्लैंम्पहरू लिफ्ट बिन्दुबाट क्रमबद्ध गरिनेछ, र अन्तिम रस्सी क्लैंप र अघिल्लो रस्सी क्लम्प बीच, रस्सी थोडा आर्यो। जब रस्सी क्लैंप अखरोट कडा छ, तार रस्सीलाई 1/2 / 1/3 व्यासमा फ्लाक्नुपर्छ।
8. तार रस्सी बिदा गर्दा, तार रस्सी नि: शुल्क डिस्क फर्शमा राखिनुपर्दछ। रोप टाउको सावधानीपूर्वक हटाइनु पर्छ र त्यसपछि ढिलो पछि अगाडि स्लाइड गर्नुहोस्। तारमा रोप डाउन तल फेंक गर्न यो कड़ाईपूर्वक निषेध गरिएको छ। तार रस्सी समाप्त भएपछि, अशुद्ध रस्सी सावधानीपूर्वक थिचिएको हुनुपर्छ। जमीनमा अतिरिक्त तार रस्सी सावधानीपूर्वक प्याक हुनु पर्छ, र मैदान मा मनोनयन बिखराउनु हुँदैन।
सर्वश्रेष्ठ ZLP श्रृंखला एरियल कारीगरी उपकरण सुरक्षा प्लेटफार्म प्लेट निलंबित
सञ्झ्याल सफाई उपकरणको लागि ZLP500 निलम्बन प्लेटफार्म
डबल केबिन उठाइयो निलम्बित प्लेटफार्म
आईएसओ सीई निर्माण तार दायरा ZLP निलम्बित प्लेटफर्म उच्च वृद्धि भवन को लागि
100m इस्पात तार रस्सी, एल्यूमीनियम 800kg ZLP 800 एरियल निलम्बित प्लेटफर्म गर्म जस्ती संग